सी को सुरक्षा कसरी गर्दैछ नेपालले ? थाहा पाईराख्नुस –
सी को सुरक्षा कसरी गर्दैछ नेपालले ? थाहा पाईराख्नुस
काठमाडौं स् चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुई दिने राजकीय भ्रमणको विशेष सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको कमान्डमा करिब पन्ध्र हजार फौज परिचालित हुनेछ। सी काठमाठौंमा उत्रेदेखि उड्दासम्‍मको सम्पूर्ण सुरक्षाको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी सेनाले लिनेछ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले अति विशिष्ट व्यक्तिको विशेष सुरक्षा कार्यविधि २०७० अनुसार राष्ट्रपति सीको सुरक्षाको सम्पूर्ण प्रबन्ध सेनाको कमाण्डमा हुने अन्नपूर्ण अनलाइनसँग बताए । पाण्डेले भने, सेनाको कमाण्डमा चारैवटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सुरक्षाकर्मीहरु परिचालित हुनेछन्।
सीको विशेष सुरक्षाका लागि चारवटै सुरक्षा निकायबाट करिब पन्ध्र हजारको संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका छन् । त्यसमा दस हजार जति सेनाबाट परिचालित हुनेछन् । सी आउने जहाज, त्रिभुवन विमानस्थल, सी यात्रा गर्ने सडक, बस्ने होटेल तथा सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशिल देखिएका अन्य स्थानमा सेनाको कमान्डमा विशेष गस्ती टोली परिचालित भइसकेको छ।
सीको जहाज काठमाडौं उत्रेपछि उनको सडक सवारी हुँदा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरले एरियल रेकी गर्नेछ । खासगरी त्रिभुवन विमानस्थलदेखि सोल्टी होटेलसम्म, होटलदेखि राष्ट्रपति कार्यलय र राष्ट्रपति कार्यलयदेखि होटलसम्म र होटलदेखि एयरपोर्टसम्मको रुटमा विशेष सुरक्षा सुरक्षा निगरानी हुनेछ । त्यो रुटमो सीको सवारी हुँदा सेनाको हेलिकोप्टले एरियल रेकी गर्नेछ।त्यसैगरि नेपाली सेनाका युद्धकार्य महानिर्देशक उपरथी प्रभुराम शर्मालाई भ्रमणको सुरक्षाको कमाण्डको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनकै नेतृत्वमा तीनै सुरक्षा निकाय परिचालित भइसकेका छन् । काठमाडौंमा मात्रै १५ हजार सेना परिचालित छन् । रिजर्व फोर्स र स्टेण्ड वाई अवस्थामा पनि सुरक्षाकर्मी राखिएको छ । चिनियां राष्ट्रपतिको सुरक्षा पहिलो घेरमा सेना, दोस्रोमा नेपाल प्रहरी, तेस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र चौथोमा गुप्तचर विभाग रहेनछ । त्यसैगरी सैनिक हेलिकोप्टरले समेत स्कर्टिङ्ग गर्ने प्रवन्ध मिलाईएको छ ।
यता नेपाल प्रहरीको तर्फबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्कर कार्कीले नेतृत्व गरेका छन् । अन्तर्रा्ष्ट्रिय विशिष्ट व्यक्ति आउँदा अपनाउने आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सबै अवलम्बन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यद्यपी चिन सरकारले पनि सी को लागि सुरक्षा विशेष प्रवन्ध गरेको छ ।
यसैगरी भ्रमण टोलीका लागि आकस्मिक स्वास्थ्य टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ । यसका लागि नेपाली सेनाको स्वास्थ्य टोलीका साथै चिकित्सकहरुको टोली रहेको छ । टोलीमा रहेका चिकित्सक बारे समेत गोपनीयता राखिएको छ । राष्ट्रपति सी शनिबार त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएपछि र फर्किनुअघिसम्म आकस्मिक स्वास्थ्य टोली साथ मै रहनेछ ।।
« साउदी अरबद्वारा नेपाललाई ३ अर्ब ४० करोड सहुलिएत ऋण प्रदान
तुम्लिङटारको गोदामघरमा भीणण आगलागी »